AHOANA NY FAMETRAHANA NY THOR BROWSER - AHOANA NO HANAOVANA - 2019
Amboary ny Tor Browser ho anao
Sarotra ny manangana fandaharam-potoana, satria ilaina ny mametraka ny zava-drehetra mba ahafahan'ny asa rehetra miasa tsara ary mety amin'ny fampiasana ny programa. Tena sarotra ny manangana programa izay ahafahana manova ny zava-drehetra ary mbola tsy nampiasaina taloha.
Ny fametrahana ny Tor Browser dia dingana lava sy miasa, fa aorian'ny asa minitra vitsivitsy dia azonao ampiasaina ny navigateur, aza matahotra ny fiarovana ny ordinateranao, ary alao haingana ny Internet.
Download ny dikan-teny farany an'ny Tor Browser
Tokony hanomboka hametraka ny tranokala miaraka amin'ireo paikady manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny fiarovana ny asa sy ny fiarovana ny angona manokana. Ao amin'ny tabilao fiarovana, maniry ny mametraka ny tsilkana amin'ny zavatra rehetra, avy eo ny navigateur dia hiaro ny solosaina sy ny viriosy ary ny fanafihana isan-karazany araka izay azo atao.
Zava-dehibe ny famolavolana ny fiainana, satria malaza ho toy izany i Thor Browser. Ao amin'ny mari-pamantarana, afaka mametraka indray ny tsipika amin'ny toerana rehetra ianao, avy eo ny fampahalalana momba ny toerana sy ny angona hafa dia tsy hovonjena.
Ilaina ny mandinika fa ny fiarovana sy ny tsiambaratelo rehetra dia mety hampihena ny haavon'ny asa ary manakana ny fidirana amin'ny loharanom-baovao maro amin'ny aterineto.
Miaraka amin'ny sehatra manan-danja indrindra dia vita avokoa ny zava-drehetra, fa ao anatin'ny iray amin'ireo fizarana misy ny paramètre dia misy tsiro kely kely izay tsy maintsy alaina ihany koa. Ao amin'ny tabilan'ny "Content", azonao ampiasaina ny endri-tsoratra, ny habe, ny loko, ny fiteny. Nefa azo atao ihany koa ny manakana ny pop-ups sy ny fampahafantarana, mendrika izany, satria ny viriosy dia afaka mivantana mankany amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny varavarankely pop-up.
Ny tranonkala tsirairay dia manana fahafahana misafidy ny milina fikarohana. Noho izany Tor Browser dia manome ny mpampiasa ny fahafahana misafidy milina karoka amin'ny lisitra sy fikarohana amin'ny fampiasana izany.
Tsy misy navigateur maoderina afaka atao raha tsy misy angona angon-drakitra. Ny Thor Browser dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana maromaro, ary ho an'ny asa mora kokoa, dia azonao ampiasaina ny fampifandraisana ny tenimiafina, taboara, tantara ary zavatra hafa eo amin'ny fitaovana.
Ao amin'ny sehatra ankapobeny amin'ny tranokala, afaka mifidy ireo karazana rehetra izay tompon'andraikitra amin'ny fahatsorana sy ny fampiasana mora foana. Ny mpampiasa dia afaka misafidy toerana iray hiantsoroka, hanamboatra tabilao ary karazana hafa.
Hitanao fa misy olona afaka manamboatra Tor Browser, mila mieritreritra kely momba ny atidoha ianao ary mahatakatra izay manan-danja ary inona no tsy azo ovaina. Amin'ny ankapobeny, maro amin'ireo fanovana no efa lasa aloha kokoa, mba hahafahan'ilay ankosotra indrindra tsy hivoatra ny zavatra rehetra.